Te-Hahatratra Ny Tsenan’Aterineto Shinoa? Fotoana Izao Hanoratana Ny Anaran-Tsehatrao Ao Shina. · Global Voices teny Malagasy
Te-Hahatratra Ny Tsenan'Aterineto Shinoa? Fotoana Izao Hanoratana Ny Anaran-Tsehatrao Ao Shina.
Voadika ny 10 Avrily 2016 5:14 GMT
Ny Rindrin'afo Lehibe ao Shina. Sary avy amin'ny Digital Trends.
Mbola nakarina ho avoavo kokoa ho an'ny orinasan-teknolojia vahiny ny sakana fidirana ao amin'ny tsenan'aterineto lehibe indrindra eto ambonin'ny tany — Shina — .
Tamin'ny voalohany, nangataka i Shina mba hotehirizina ao anatin'ny sisitaniny ny mombamomba ny mpisera. Avy eo izany fitakiana izany nahitatra tamin'ny votoaty an-tserasera. Ary ankehitriny, eo ampanomanana fitsipika vaovao hitaky ny tranonkala rehetra miantrano ao Shina izy hanoratra ny anaran-tsehatra ao amin'ny firenena.
Inona moa ny Domain Name System (DNS) na ny rafitra fanomezan'anaran-tsehatra?
Rafitra itsinjaram-pahefana ho fanomezana anaran-tsehatra ho an'ny solosaina, vohikala, na izay fitaovana rehetra mifandray amin'ny aterineto ny DNS ary mamadika ho mora vakiana kokoa ny anaran-tsehatra voatahiry (ohatra “globalvoices.org”) ho lasa adiresy IP nomerika (izany hoe 25.19.45.126) ilaina amin'ny fanondroa-toerana sy famantarana servisin-tsolosaina sy fitaovana manana arofenitra tambajotra miasa ao aminy. Amin'ny alalan'ny fanomezany, fitsinjarany alfabetikan'anaran-tsehatra maneran-tany ny rafitra fanomezan'anaran-tsehatra no tafiditra ho singa manandanja amin'ny fiasan'ny aterineto. (fanazavana novaina avy amin'ny Wikipedia )
Nanavao ny Fitantanana ny Fitsipiky ny Anaran-tsehatra Aterineto ao aminy i Shina ary namoaka drafitra an-tserasera tamin'ny 25 Martsa hanontaniana ny hevitry ny hafa mandritra ny iray volana. Manamarika manokana ny fitakiana vaovao fa ny vohikala rehetra miantrano ao Shina dia tsy maintsy manoratra ny anaran-tsehany amin'ny sampan-draharaha mahazo alalana mba hahazoana miditra amin'ny
Tamin'ny Febroary 2016, namoaka Lalànam-panjakana Vaovao ho an'ny Famoahana Asa An-tserasera izay mitaky ny vahiny rehetra manana fampitam-baovao te-hanana ny mpihainony na mpijeriny na mpamakiny ao amin'ny faritr'i Shina Entim-Bahoaka hampiantrano ny votoatiny rehetra- “lahatsoratra, sarintany, lalao, tantara an-tsary ary raki-peo” – amin'ny lohamilina miorina ao aminy i Shina. Ny hany safidy ho an'ny orinasa fampahalalam-baovao vahiny dia ny hizara ireo votoatiny amin'ny alalan'ny tetikasa mifototra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka ao an-toerana miaraka amin'ny fankatoavana mialoha avy amin'ny Sampan-draharaham-panjakana Misahana ny Gazety, Famoaham-boky, Radio, Sarimihetsika ary Fahitalavitra.
Tsy natao anamafisana fotsiny ihany ny maha ara-dalàna ilay fitsipiky ny Rindrin'Afo, izay rafitra hanakanana ny vohikala ivelan'ny firenena izany, fa mba hanokafana ihany koa ny tokonam-baravarana ho an'ny orinasa fampahalalam-baovao vahiny izay te-hiditra ao amin'ny tsena Shinoa.
Orinasan-teknolojia vahiny eo ambanin'ny ankihiben'i Shina
Ohatra iray hafa amin'ny fahombiazana ihany izany haneren'ny manampahefana Shinoa ny orinasan-teknolojiam-pifandraisana “hanaja” ny fitsipika eo amin'ny firenena sy eny ifotony. Nanomboka tamin'ny 2014 ny orinasa IT vahiny dia voatery nanao soniam-panekena fantatra amin'ny hoe Fanambaran'ny Mpamatsy Vokatra Teknolojiam-Baovao Hanana Adidy Hiaro ny Mpisera. Takian'ny fanekena ny orinasan-teknolojiam-baovao hitahiry ny tahirin-kevitra ao anatin'ny sisin-tanin'i Shina.
Hatramin'ny voalohany nampiharana ny fitsipika ny orinasan-teknolojia goavambe, anisan'izany ny Apple, Microsoft ary LinkedIn, no nanomboka nitahiry ny lahatahirin'ny mpiseraserany ao amin'ireo foiben'ny lahatahiry ao an- toerana. Maro kokoa aza ny orinasa nanatevin-daharana ny klioban'ny tsenan'i Shina tao anatin'ny roa taona farany. Ny fametrahana lohamilina ho an'ny tahirin-kevitra no dingana iray hafa mankany amin'ny ihany ao amin ‘ny lalana aleha.
Saingy nandray izany rafi-pitondrana fanaraha-maso izany amin'ny dingana vaovao ny Fitsipika Fitantanana ny fanomezana Anaran-tsehatra vaovaon'ny Aterineto, satria izany dia mitaky ny vohikala rehetra miantrano ao Shina hanana ny anaran-tsehatra voasoratra anarana ao amin'ny mpanome tolotra DNS ao an-toerana. Ny orinasa izay tsy mahavita manao izany dia tsy tafiditra tsotra izao amin'ny tambajotra ao anatin'i Shina.
Ny andininy faha-37 ao amin'ny drafitra mivaky hoe:
Ny anaran-tsehatra izay mifandray amin'ny tambajotra avy ao anatin'ny faritaniny dia manana tolotra nomen'ny sampan-draharaha miandraikitra ny fisoratana ny anaran-tsehatra ao an-toerana , ary hanatanteraka asa fitantànana ireo sampan-draharaha miandraikitra ny fitantanana fisoratana anaran-tsehatra ao an-toerana ireo.
Ho an'ny anaran-tsehatra izay mifandray amin'ny tambajotra avy ao anatin'ny faritaniny, nefa tsy tantànan'ny mpiandraikitra ny fisoratana anaran-tsehatra ao an-toerana, dia mety tsy hanome tolotra fidirana amin'ny tambajotra.ny mpanome tolotra amin'ny fidirana aterineto
Raha vao navoaka ny fitsipika vaovao, dia tsy maintsy hanoratra ny anaran-tsehatry ny tranonkalany miaraka amin'ny mpamatsy DNS ao an-toerana ny orinasa vahiny mpitari-dalana, ao anatin'izany ny Microsoft sy ny Apple, mba hitoetra ho azo idirana ao Shina.
Ary tsy amin'ny orinasa vahiny ihany no misy fiantraikany izany. Ankehitriny, na ny orinasa lehibe Shinoa aza dia manana ny anaran-tsehatra voasoratra amin'ny mpanome tolotry ny anaran-tsehatra vahiny , anisan'izany Taobao sy Baidu.
Tsy misy fiantraikany amin'ny tranonkala tsy manana lohamilina iantranoana ao Shina, toy ny Facebook, Google sy Twitter ny fiovana mazava ho azy. Mitohy toy ny mahazatra, ny fanakanana azy ireo ao amin'ny firenena.
“Raha te-hampivelatra ny raharaham-barotra ao Shina ny orinasa vahiny, Tsara kokoa ny miara-miasa amin'ny manampahefana ao an-toerana”
Jiang Bojing, mpanadihady Teknolojiam-baovao nanazava tamin'ny mpamoaka vaovao mpikambana amin'antoko, Ny Taratasy, ny antony ‘ao ambadiky ny lalàna:
Voalohany indrindra, mandrara bebe kokoa ireo vohikala manimba sy mampidi-doza mifandray amin'ny tambajotra ao an-toerana izy io. Faharoa, mampiroborobo ny anaran-tsehatra tampon'i Shina izy . Fahatelo, mandefa famantarana any amin'ny vondron'orinasa any ampitan-dranomasina fa raha te-hampitombo ny raharaham-barony ao Shina izy ireo, dia tsara kokoa ny miara-miasa amin'ny manam-pahefana ao an-toerana.
Nanasongadina ilay Teknisiana bilaogera William Long fa raha toa ka tsy maintsy misoratra anaran-tsehatra ao Shina ny vohikala rehetra ampiantranoina ao , dia tsy maintsy miatrika ny fiantraikany na ara-politika izy na ara-teknika izay ny manam-pahefana no manana fahefana hampiato ny anaran-tsehatra eo ambanin'ny “hazonin'ny mpanjifa” noho ny antony mety isehoan'ny votoaty saropady ao amin'ny tranonkala. Ankoatra izany, miasa amin'ny alalàn'ny rafitra mampiasa anarana tena izy ny fisoratana anarana DNS ao Shina, mahatonga azy sarotra kokoa ho an'ny mpanjifa ny hamindra ny lohamilina DNS .
Tsy maintsy atao an-tsaina ihany koa fa ny sehatra tampony .CN dia eo ambany fitantanan'ny Foibem-Baovao Tambajotra an'Aterineton'i Shina (CNNIC) izay tompon'andraikitra amin'ny famoahana ny diplaomam-piarovana amin'ny servisy mpanome tolotra aterineto. Tamin'ny herintaona, hitan'ny Google sy ny Mozilla fa efa namoahan'ny CNNIC diplaoma ny fikambanan'orinasa efa nampiasa olona mpisambotra lahatahiry antenatenan-dalana misy eo amin'ny mpiserasera sy ny heverina ho andefasana azy nefa mamily ny mpiserasera mankany amin'ny tranonkala hafa mihitsy — dia ny iray izay tahaka ilay andefasan-kafatra, nefa raha ny marina tena toerana hafa tanteraka. Ny fiverimberenan'ny “fahadisoana” toy izany matetika tato anatin'ny taona vitsivitsy no nahatonga ny sasany nanontany tena raha toa ka hiafara amin'ny fanitsakitsahana ny fiarovana ny fisoratana anaran-tsehatra ao amin'ny CNNIC.
Raha manamarika manokana ilay lalàna fa ny mpanome tolotra aterineto dia tsy tokony hanome fidirana ho an'ny tranonkala voasoratra anaran-tsehatra avy any ivelany amin'ny lohamilina ao Shina, dia tsy milaza manokana izy raha afaka manohy manome fidirana ny tranonkala vahiny tsy manam-botoaty saropady avy any ivelany manana ny lohamiliny sy ny DNS avy any ampitan-dranomasina ny Sampan-Draharaha Mpanome Tolotra Aterineto na tsia. Ao anatiny lalina mety hampiova zavatra indrindra, manahy ny sasany fa mety hanapaka tanteraka an'i Shina amin'ny Aterineto maneran-tany ilay lalàna . Nanoritra ny Minisiteran'ny Indostria sy ny Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao fa amin'ny vohikala ampiantranoina ao Shina ihany no mihatra ny fitsipika ary tsy misy fiantraikany amin'ny fampandrosoana ara-dalànan'ny raharaham-barotry ny orinasa vahiny ao Shina izany, fa misalasala anefa ny sasany.
Niteny tamin'ny Wall Street Journal (amin'ny alàlan'ny China Digital Times ) ny loharanom-baovao izay nandray anjara tamin'ny fandrafetana ny fitsipi-dalàna :
Tsy misy olona ao Shina manana olana amin'ny fitsidihana ny whitehouse.gov. Tsy voatery ny Trano Fotsy hanome ny fahazoan'ny manampahefana miditra fahazoam-baovaon'ny tambajotra, satria tsy misy ifandraisany amin'i Shina izany […] Na izany aza, mety hahatratra ny orinasa vahiny betsaka kokoa izay manana na te hanorina vohikala iray na mikasa hanangana asa amin'ny aterineto hafa mikendry ny Shinoa mpanjifa ny fitsipika.
Izany rehetra izany dia midika fa ny orinasa ara-teknolojia vahiny dia tsy maintsy mandoa saram-pidirana ao amin'ny tsena Shinoa. Afaka manantena fotsiny isika fa hiakatra hatrany rehefa mandeha ny fotoana ny isa mipetaka eo amin'ny vidin'ny marika.